Horudhac: Liverpool vs West Ham United… (Reds oo raadinaysa guul si ay tallaabo ugu qaado hanashada horyaalka Premier League) – Gool FM
Horudhac: Liverpool vs West Ham United… (Reds oo raadinaysa guul si ay tallaabo ugu qaado hanashada horyaalka Premier League)
(Liverpool) 24 Feb 2020. Kooxda Liverpool ayaa indhaha ku haysa inay guul gaarto si ay tallaabo ugu qaado hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, marka ay caawa garoonkooda Anfield ku soo dhoweynayaan naadiga West Ham United.
Reds ayaa haatan 19-dhibcood oo saafi ah ka sarreysa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City, halka West Ham oo qaab ciyaareed niyad-jab leh soo bandhigtay xilli ciyaareedkan ay ku jirto kaalimaha looga laabto horyaalka.
Taariikhda: Isniin, 24 Feb 2020
Garsooraha: Jonathan Moss (England)
Kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa garoomada ka maqnaan doona muddo saddex Isbuuc ah kaddib dhaawac ka soo gaaray dhanka muruqa.
Xherdan Shaqiri ayaa weli ku maqan dhaawac kubka ah.
Daafaca Naadiga West Ham ee Ryan Fredericks ayaa la maqan dhaawac garabka ka soo gaaray kulankii dhowaa ee Manchester City, sidaasi darteed Pablo Zabaleta ayay u badan tahay inuu ku soo bilaaban doono.
Andriy Yarmolenko ayaa weli maqnaanaya, iyadoo Jack Wilshere uu isna dhaawac muddo dheer ah ku maqan yahay.
>- Kooxda Liverpool ayaa guul gaartay labadeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay garoonkeeda kula ciyaartay West Ham United, waxaana ay guul weliba ka dhaliyeen afar gool.
>- West Ham ayaa guuleysatay mid ka mid ah 46-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay la ciyaareen Liverpool, guushaas kaliyana waxa ay ahayd mid ay 3-0 uga adkaadeen bishii Agoosto sanadkii 2015-kii, markaasoo uu watay macallin Slaven Bilic; kooxda the Hammers lagu naynaaso ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso 31 ka mid ah 46-kaas kulan.
>- West Ham ayaa kaliya hoggaamisay 126 daqiiqo 23 kulan oo ay marti ahaayeen horyaalka Premier League marka la isku daro wadar ahaan oo ay wajaheen Liverpool, 87 ka mid ah waxay yimaadeen guushii 3-0 oo ay Anfield kaga gaareen bishii Agoosto sanadkii 2015-kii.
>- West Ham ayaa guuleysatay labo ka mid ah 41-kooxdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti ahaayeen (Away) ciyaaraha sare ee horyaalka, isla markaana ay kooxda ay la ciyaarayaan ay hoggaanka horyaalka u hayso, waxaana ay kala kulmeen 8 barbaro iyo 31 guuldarro, iyagoo garaacay Manchester United oo ay kaga adkaadeen 1-0 bishii May 2007 iyo Manchester City oo ay uga badiyeen 2-1 bishii September sanadkii 2015-kii.
>- Liverpool ayaa guuleysatay 17-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, waaana ay hal guul u jiraan inay soo barbareeyaan rikoorkii ciyaaraha sare ee horyaalka Ingiriiska oo ay dhigtay Manchester City intii u dhaxaysa bishii August ilaa December sanadkii 2017-kii, markaasoo ay adkaadeen 18 kulan oo xiriir ah.
>- Kooxda Liverpool ayaa guuleysatay 20-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Liverpool ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 19 ka mid ah 20-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay gurigeeda ku ciyaartay horyaalka Premier League.
Arsenal oo garoonkeeda Emirates guul muhiim ah kaga gaartay Everton… +SAWIRRO
Edinson Cavani oo noqday xiddigii ugu horreeyey ee PSG u dhaliya 200 oo gool & Kooxda oo abaal-marin siisay… + SAWIRRO